Jose Mourinho oo Farsamo Cusub la yimid Markii Roosayaal laga dharjiyay | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Jose Mourinho oo Farsamo Cusub la yimid Markii Roosayaal laga dharjiyay
Tababaraha kooxda Manchester United Jose Mourinho ayaa la yimi qorshe cusub iyo farsamo uu ku daawaday ciyaartii ELF Cup ay kooxdiisu ku durdurisay West Ham United ee ka dhacday garoonka Old Trafford, taas oo uu ganaax kaga maqnaa.
Mourinho oo 53 jir ah ayaa Axaddii hore lagu ganaaxay in aanu kooxdiisa garoonka usoo raacin hal kulan, ciyaartoygiisuna ay ku keliyeystaan madasha, markaas oo ay kulan horyaalka Ingiriiska ka tirsan la lahaayeen naadiga lagu naanayso Hammers.
Tababarahan reer Portugal ayaa sheegay in uu meel qarsoodi ah ku daawanayay ciyaarta isla markaana uu xidhiidh la samaynayay kalkaaliyeyaashiisa iyo ciyaaryahannada kale ee beddalka sugayay.
Waxaa la arkayay Mourinho oo sii galaya garoonka Old Trafford ee Manchester United iyo isaga oo meesha garoonka laga galo ku sugayay tababaraha West Ham si uu u salaamo wax yar uun ka hor intii ayna ciyaartu bilaabanin. Balse intaas wixii ka dambeeyay laguma arag qaybta ciyaarta laga daawado, lagumana arkin isaga oo bannaanka kore uga sii baxaya garoonka.
Mourinho ayaa loo ogolaa in uu garoonka soo galo oo uu ciyaarta ka daawado meel kore. Wuxuuse sheegay in ay talaadadii dadaal badan sameeyeen qofkastana uu diyaarsanaa
Wuxuuna intaas ku daray in uu aad ugu kalsoon yahay kalkaaliyeyaashiisa ayna gaadhsiinayeen xogta uu u baahnaa in uu kooxda la wadaago.